छेपारो - Jyotinews
ज्योतिन्यूज २०७७ असार २३ गते १०:०७
प्रहरी हाकिम ओचुमेलोब नयाँ ओभरकोट पहिरेर हातमा एउटा बण्डल च्याप्दै चोक बजारबाट अगाडि बढ्दै छ । रातो कपालवाला सिपाही हातमा टोकरी लिएर हाकिमको पछि पछि लम्किरहेको छ । टोकरीमा भर्खरै जफत गरिएको ऐँसेलु टन्नै भरिएको देखिन्छ । सडक चारैतिर शान्त छ ….चोकमा एउटै मानिस छैन……। पसल र भट्टीका झ्याल ढोकाका खापा सबै खुल्ला छन् । लाग्छ, ती खुल्ला खापाहरु भोकाहरुलेजस्तै मुख बाएर ईश्वरको सृष्टिलाई उदासी भरिएका आँखाले ट्वाल्ल हेरिरहेकाछन् । वातावरण कतिसम्म शान्त छ भने यतिखेर सडकआसपास कुनै एक भिखारी पनि देखिएको छैन ।”एँ तँ मलाई टोक्ने ? दुष्ट राक्षस कहीँको !“ ओचुमेलोबका कानमा अचानक यो आवाज ठोक्किन्छ । ”समात् समात् केटा हो, यो राक्षस कतै उम्केर जान नपाओस् र यसले फेरी कसैलाई टोक्न नपाओस् । समात् समात् …..आः समात्दै छ ! ल अव ठीक छ ।“कुकुरले कुइँकुइँ गरेको आवाज सुनिन्छ । ओचुमेलोबले मुन्टो फर्काएर हेर्छ । व्यापारी पिचुगीनकी छोरीको पसलअगाडिबाट एउटा कुकुर तीन खुट्टामा भाग्दै दगुर्दै छ । एकजना मान्छे त्यस कुकुरका पछाडि दगुरेको छ । त्यस मान्छेले छिटको कलफदार कमिज र त्यसमाथि वास्कोट लाएकोछ । वास्कोटमा टाँक एउटै छैन । त्यो मानिस पछाडिबाट कुकुर समात्ने कोसिसमा छ । समात्ने हतारमा झण्डै झण्डै लड्छ र पनि बल्ल सम्हालिँदै कुकुरको पछाडिको खुट्टा समात्न भ्याउँछ । कुइँ कुइँ कुइँ कराउँछ कुकुर ।” एः उम्कन नपाओस् है !“ कसैको दह्रो आवाज गुन्जन्छ । भित्र उँघिरहेका पसलेहरु पसल पसलबाट गर्धन बाहिर निकालेर हेर्न थाल्छन् । यत्तिकैमा चोकमा एकाएक मानिसको भीड उम्रन्छ । मानौँ त्यतै कतै पृथ्वी उधारेर त्यहाँ भित्रबाट यी मानिस यहाँ भीड लागेका होउन् ।
कुकुरले कुइँकुइँ गरेको आवाज सुनिन्छ । ओचुमेलोबले मुन्टो फर्काएर हेर्छ । व्यापारी पिचुगीनकी छोरीको पसलअगाडिबाट एउटा कुकुर तीन खुट्टामा भाग्दै दगुर्दै छ । एकजना मान्छे त्यस कुकुरका पछाडि दगुरेको छ । त्यस मान्छेले छिटको कलफदार कमिज र त्यसमाथि वास्कोट लाएकोछ । वास्कोटमा टाँक एउटै छैन । त्यो मानिस पछाडिबाट कुकुर समात्ने कोसिसमा छ ।
“हजू्रर साहब, त्यहाँ झगडा मच्चिँदैछ जस्तो लाग्छ । के भाको हो !” सिपाही भन्छ ।ओचुमेलोव बायाँ मोडिन्छ र भीड भएतिर लम्कन्छ । पसलको ठीक अगाडि एउटा मान्छे उभिएको छ । उसको वास्कोटका टाँक गायब छन् । उ दायाँ हात माथि उचालेर आफ्नो रगतपच्छे औंला देखाइरहेको छ । उसको नसिलो अनुहारमा स्पष्ट लेखिएझैँपढ्न सकिन्छ…“तँलाई म त्यसै छोड्नैवाला छैन बुझिस् कुत्ते ?” माथि ठड्याइएको उसको हात र औँलाहरु पनि विजयपताका जस्ता देखिन्छन् । ओचुमोलेवले त्यस व्यक्तिलाई चिन्छ । त्यो यतैको सुनार हो ख्रूकिन । उसका अगाडि सडकको बीचोबीच ग्रेहाउण्ड जातको सेतो छाउरो अपराधीले जस्तै अगाडिका दुवै खुट्टा पसारेर लुमुक्क पर्दै थुतुनोदेखि पुच्छरसम्म काँपेको छ । उसको थुतुनो चुच्चे छ । ढाडमा पहेँलो दाग छ । आँसु भरिएका उसका आँखामा आपत्विपत् र डरको गाढा छाप छ ।“केको हाहल्ला हो यो ?” आफ्ना दुवै कुमले भीड चिर्दै पसेर ओचुमोलेव सोध्छ, “एः तिमी किन आफ्नो औँला माथि उठाइराछौ ? अहिले यहाँ चिच्याइरहेको को ?”“हजूर, म चूपचाप आफ्नो बाटो हिँड्दै थिएँ !” आफ्नो मुखनिर हात राखेर खोक्दे ख्रूकिनले भन्यो, “एक बालिकका विषयमा मिबी मित्रीचसँग मेरो केही काम थियो र निस्केको थिएँ । मैले पत्तै नपाई अकस्मात् नै यस कुत्ताले आएर मेरो औँला टोकिदियो । माफ गर्नुस् हजूर, म मेहनत गरेर दानापानी जुटाउनु पर्ने मान्छे । मेरो काम पनि सजिलो छैन । यी औँलाले म एक हप्तासम्म काम गर्नै सक्दिन होला । मलाई क्ष्तिपूर्ति दिलाइदिनुहोस् हजूर, । अनि हजूरु, यी यस्ता जन्तुले हामीलाई जथाभावी टोकिरहुन्, हामी चूपचाप सहिरहूँ यस्तो त कुनै कानूनमा लेखेको छैन । बाटो हिँड्दा सवै कुकुरले यसरी नै टोक्ने हो भने हामीजस्ताले कसरी बाँच्ने ?”“हुँ….ए….त्यस्तो ….?” घाँटी सफा गर्दै…आँखीभौँ उचाल्दै ओचुमेलोवले भन्यो, “ल ठीक छ । यो कुकुरचाहिँ कसको हो ? ल भन । म कार्बाही नगरी त्यसै छोड्दिनँ । कुनै हालतमा छोड्दिनँ । यसरी कुकुर छाडा छाड्नुको स्वाद राम्ररी चखाएरै छाड्छु । कानूनमुताबीक नचल्ने मानिससँग कडाइको व्यवहार त गर्नैपर्छ । म त्यसको दिमाग ठाउँमा आउने गरी कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छु । बदमास कहीँको ! आफ्नो कुकुर र बस्तुभाउ सडकमा छाडा छोड्नुको नतिजा के हुन्छ सजाय पाएपछि बल्ल थाहा पाउँछ !” आफ्नो सिपाहीलाई सम्बोधन गर्दै ओचुमोलोवले भन्यो, “यो कुकुर कसको रहेछ तुरन्त पत्ता लगा । एउटा रिपोर्ट तैयार गर् र यस कुत्तालाई मराइदे । यो कुकुर बहुलाहा पनि हुनसक्छ । म सोध्दैछु यो कुकुर कसको…. ?”
“हुँ….ए….त्यस्तो ….?” घाँटी सफा गर्दै…आँखीभौँ उचाल्दै ओचुमेलोवले भन्यो, “ल ठीक छ । यो कुकुरचाहिँ कसको हो ? ल भन । म कार्बाही नगरी त्यसै छोड्दिनँ । कुनै हालतमा छोड्दिनँ । यसरी कुकुर छाडा छाड्नुको स्वाद राम्ररी चखाएरै छाड्छु । कानूनमुताबीक नचल्ने मानिससँग कडाइको व्यवहार त गर्नैपर्छ । म त्यसको दिमाग ठाउँमा आउने गरी कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छु । बदमास कहीँको !
“यो शायद झिगालोग जर्सावको कुकुर हो !” भीडबाट कसैले भन्यो ।“झिगालोग जर्सावको ?! अँ ए एल्दिरिन, मेरो कोट् फुकाल् त । उफ् ! कस्तो गर्मी !! पानी पर्लाजस्तो पो छ । अँ…मैले बुझ्न सकेको छैन यस कुकुरले तँलाई नै टोक्यो चाहिँ कसरी ?” ख्रूकिनतिर मोडिँदै ओचुमेलोवले भन्यो, “यो यत्रो कुकुर तेरा औँलासम्म कसरी पुग्यो ? यो यति फुच्चे जन्तु तँ यति लक्का जवान मान्छे ! कुनै किलासिलामा परेर घाइते भएको होला तेरो औँला । कुकुरले टोक्यो भन्न पाए क्ष्तिपूर्ति पाउँला भनेर तैँले कुरा बनाएको होस् । तँजस्ता बदमासको रौँ रौँ नसा नसा थाहा छ मलाई, बुझिस् ?”“ख्यालख्याल ठानेर यसले कुकुरको थुतुनोमा आपूmले तान्दातान्दैको चुरोटको ठुटो झोस्यो । कुकुर पनि लाटो थिएन । यसको चुरोट समात्ने औँलामै क्याक्कै टोकिदियोे । यो आपैm सिल्ली मान्छे हो !” भडिबाट कसैले भन्यो ।“अरे लिच्चड, भूmट किन बोल्छस् ? जब तैँले देखेकै छैन त कुरा बनाई बनाई किन बोल्छस् ? हाकिम साहव आपैm समझदार हुनुहुन्छ । को साँचो को झुटो वहाँ आपै थाहा पाउनु हुन्छ !”
“म झुट्टा रहेछु भने अदालतबाट त्यस्तै पैmसला गराएर ले ! कानुनमा लेख्याछ ‘अव हामी सवै बराबर छौं ।’ खूद मेरो भाइ पनि पुलिसमा छ । म भन्दिन्छु,….बुझिस् ? अँ…..”
“बकबास बन्द गर् !”
“हैन, हैन, यो जर्साबको कुकुर हैन !” सिपाहीले गम्भीर हुँदै भन्यो, “वहाँको महलमा यस्तो कुकुर छँदैछैन । वहाँका त सवै कुकुर सिकारी पोन्टर मात्रै छन् ।”
“तँलाई ठीक–ठीक थाहा छ ?”
“छ साहप !”
“मलाई पनि थाहा छ । जर्सापका कुकुर सवै असल जातका छन् । एक से एक महँगाा कुकुर छन् जर्सापका महलमा । यो कुकुर ? यो कुनै कुकुरजस्तो कुकुर छ र ? हेर न कस्तो मरनच्याँसे लुते ! कल्ले पाल्छ यस्तो कुकुर ? तिमीहरुको दिमाग त ठीक छ ? मस्कोमा पीटर्सबर्गमा यदि यस्तो कुकुर देखियो भने थाहा छ, के गर्नु पर्छ ? नियम कानुन खोज्नतिर नलागी मिनटभरमा सिध्याइदिनुपर्छ । ख्रूकिन, तिमीलाई घाउ भा छ ? यस मामिलालाई तिमी यसै यत्तिकै नछोड ! यी बदमासहरुलाई तिनका बदमासीको स्वाद चखाउनै पर्छ । त्यसै त्यत्तिकै काम चल्दैन !”
“मलाई पनि थाहा छ । जर्सापका कुकुर सवै असल जातका छन् । एक से एक महँगाा कुकुर छन् जर्सापका महलमा । यो कुकुर ? यो कुनै कुकुरजस्तो कुकुर छ र ? हेर न कस्तो मरनच्याँसे लुते ! कल्ले पाल्छ यस्तो कुकुर ? तिमीहरुको दिमाग त ठीक छ ? मस्कोमा पीटर्सबर्गमा यदि यस्तो कुकुर देखियो भने थाहा छ, के गर्नु पर्छ ?
“तर..यो कुकुर जर्सापकै पनि त हुन सक्छ !” सिपाही आपैmसँग बोल्छ, “यसको निधारमा लेख्या त छैन । जर्सापको कम्पाउण्डमा हिजो मैले दुरुस्तै यस्तै कुकुर देख्याथिएँ !”
“हो हो यो कुकुर जर्सापकै हो !” भीडभित्रबाट कसैको आवाज आउँछ ।
“हँ…!? ए एल्दिरिन मेरो कोट मलाई लगाइदे त ! मलाई जाडो लागिरा छ । यस कुकुरलाई जर्सापकोमा लिएर जा र निक्र्यौल गर् । जर्सापकै रहेछ भने ‘ओचुमेलोव साहेबले भेट्टाएर पठाएदिनुभएको’ भनेर बिन्ती गर्नू । अनि हेर, सँगै के पनि बिन्ती गर्नूृ भने ‘यस्तो कलिलो कुकुरलाई सडकमा निस्कन दिनु उचित नपर्ला कि ? मानिसहरु यो कति महँगो कुकुर हो त्यो मर्म बुझ्दैनन् । कुनै बदमासले यसको थुतुनोेमा चुरोको ठुटो झोसिदियो भने यो बर्बाद हुन्छ । कुकुर यसै त धेरै नाजुक जनावर हो !’…….एः हात तल झार् त ख्रूकिन, स्वाँठ कहीँको ! आफ्नो त्यो फोेहरी औँला दुनियाँलाई किन देखाउँछस् हँ ? सारा कसूर तेरो हो, तेरो….!”
“उः जर्सापका भान्छेकाजी यतै आउँदै छन् । उनलाई सोधेपछि पक्का हुन्छ ।… एः..प्रोखोरजी, एक छिन यता आउनुस् त भाइ, यो कुकुर हेर्नूस् त ! यो तपाइँहरुको कुकुर होइन ?”
“आम्मै, वाह ! हाम्रो महलमा यस्तो कुकुर कहिल्यै थिएन !!
“यो सोध्ने कुरै होइन । बेकारमा समय बर्बाद गर्नु छ र ?” ओचुमेलोव भन्छ, “यो साह्रैआना भुस्याहा कुकुर हो । यहाँ उभिएर यस कुकुरका बारेमा कुरा गर्नु व्यर्थैमा समय बर्बाद गर्नु मात्रै हो । भनेँ नि, भुस्याहा भनेपछि भुस्याहा ! मार्दे यसलाई, अनि काम खत्तम !”
“हाम्रो त होइन”, फेरी कुकुरतिर हेर्दै प्रोखोर भन्छ, “तर यो जर्सापका भाइको कुकुर हो । हाम्रो जर्सापलाई ग्रेहाउण्ड कुकुरमा कुनै रुचि छैन । तर वहाँका भाइलाई यो जातको कुकुर मन पर्छ ।”
“के भन्नुभो ? जर्सापका भाइ आउनभा छ ! व्लादिमीर इबानिच आउनु भा छ ?” ओचुमेनोव अचम्म मान्दै अचानक बोल्छ । उसको अनुहार आह्लादले चमक्क चम्केको छ । भन्छ, “हेर त ! मलाई त थाहै थिएन । अहिले वहाँ यतै रोकिनुहुन्छ कि कसो ?”
“एक छिन सोच त, ब्लादिमीर इबानीच आफ्ना दाइलाई भेट्न आउनुभा छ ! वहाँ आउनुभा छ भन्ने मलाई त थाहै भएन । त्यसो भए यो कुकुर वहाँकै हो ? यो त बडो खुसीको कुरा भयो । ल यसलाई लिएर जानुस् । कुकुर धेरै राम्रो छ ! चलाख छ !! त्यसको औँलामा क्याक्क टोक्यो । हा हा हा…ठीक छ, ठीक छ अव थर्थर काँप्न पर्दैन बाबु, गुर्र गुर्र गर्छस् ? बदमास ? तँलाई रिस उठ्यो ? कति घुतुमुने, कति राम्रो छाउरो…… !”
प्रोखोर कुकुरलाई आफूतिर बोलाउँछ र पसल अगाडिबाटै महलतिर लिएर जान्छ । त्यहाँ जुटेको भीड ख्रूकिनमाथि छेडछाड गर्दै हाँस्न थाल्छ ।
“म तँलाई ठीक पार्दिन्छु ! बुझिस् ?” ओचुमोलोव ख्रूकिनलाई धम्की दिन्छ र आफ्नो ओभरकोट सम्हाल्दै चोकबजार बीचबाट आफ्नो बाटो लाग्छ ।प्रस्तुतिः एसआरन
विश्वमा एकै दिन पाँच लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
विश्वमा एकै दिन ६ लाख २९ हजार बढी नयाँ संक्रमित थपिए
विवाद मिले एमालेमा, नमिले सरकारमाः माधव नेपाल
५१ पदकसहित टोकियो ओलम्पिकमा चीन शीर्ष स्थान कायमै
साउन २० देखि प्रेस पास र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको काम अनलाइनबाट
कुश्मा नगरपालिकामा तालाबन्दी